Muuri News Network » (Daawo Sawirada)Xulka Qadar oo caawa si Xarako leh ugu guuleestay Asian Cup
(Daawo Sawirada)Xulka Qadar oo caawa si Xarako leh ugu guuleestay Asian Cup
Feb 2, 2019 - Comments off
Xulka kubada cagta ee dalka Qadar ayaa caawa si xarako leh ugu guuleestay Koobka Asian Cup, kadib markii guul daro xanuun badan dhabarka u saariyeen xulka Japan oo isugu soo hareen ciyaarta Fiinaalka.
Kulankan xiisaha badnaa ayaa Qadar guusha ku raacday 3 gool iyo hal , waxaana goolasha ay xulka Qadar ku badiyeen mid kamid ah dhaliyay Ciyaaryahanka Akram Cafiif halka labada gool kale uu caawinteeda lahaa ciyaaryahankan.
Xulka Qadar ayaa la gudoonsiiyay koobka Asian Cup ay ku guuleesteen, waxa ay sidoo kale ciyaartoyda Qadar ku guuleesteen abaal marino kala duwan sida gool dhalinta , Ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa iyo gool dhalinta.
Ciyaaryahanka asal ahaan kasoo jeeda dalka Sudan ee Almoez Ali uu ku guuleestay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee tartanka iyo sidoo kale gool dhaliyaha ugu sareeya ee koobkan, waxa uuna dhaliyay 9-gool .
Koobkan ay ku guuleesatay dalka Qadar ayaa aha amid xiiso iyo xamaasad gaar ah lahaa, waxaa Xidigga Qadar ay guul darooyin xanuun badan dhabar u saareen Xulalka Sacuudiga iyo Sacuudiga, waxaana Qadar tartanka intuu socday laga dhaliyay hal gool oo kaliya